9 Arrimood oo ninkii sameeya ay dumarka jeclaanayaan - Muraayad
Home Nolosha 9 Arrimood oo ninkii sameeya ay dumarka jeclaanayaan
9 Arrimood oo ninkii sameeya ay dumarka jeclaanayaan
Dhaqamada ragga wax garadka ah ay leeyihiin.
Talooyin muhiim u ah lamaaneyaasha | Image Credit: Reuters
Shukaansigu waa qeyb ka mid ah nolosha, qof walbana wuxuu baadigoob ugu jiraa ruuxii uu nolosha la wadaagi lahaa.
Sida uu qabo dhaqankeenna suuban, ragga ayaa u xusul duuba in ay gabdhaha shukaansi la raadsadaan. Laakiin waa lagu kala xariifsan yahay xodxodashada.
Mararka qaar gabdhaha casrigan jooga waxay moodaan in nimanka u roon haweenka ay yihiin oo kaliya kuwa ku jira filimada iyo sheekooyinka ku qoran buugaagta.
Waa in ay ogaadaan in runtu aysan sidaas ahayn oo ay jiraan niman macquul ah oo dhab ah.
Badanaa cilladdu kama taagna billaabista wada sheekeysiga iyo wada socoshada, si kastoo ay ahaataba waa la gudo galaa, hase ahaatee waxaa jira imtixaan laga rabo wiilka inuu ka gudbo si uu gabadhaas uga dhaadhiciyo inaysan meel kale uga sii gudbin.
Kuwani waa sagaai arrimood oo haddii aad sameyso aad ku hana kartid qalbiga haweeney kasta oo aad daneyneyso.
Sidoo kale qodobbadan waxay ku socdaan ragga xaasaskka leh ee doonaya in ay boqoraddooda farxad galiyaan, jacayl aan dhammaad lahaynna ka helaan.
1- Hadiyado aan sabab lahayn
Ragga caqliga badan ee maanta jira qaarkood uma baahdaan in ay munaasabad ama waqti gaar ah la sugaan in ay gabadha ay shukaansadaan u keenaan ubax ama hadiyad kale oo qiimo leh.
Tusaale ahaan, isagoo maalin iska caadi ah shaqada kasoo baxay ama magaalada iska dhex socda ayuu dukaan muraayaddiisa ka arkayaa waxyaabo qurux badan, durbadiina waxaa ku soo dhaceysa gabadha uu shukaansado ama xaaskiisa.
Wuu soo iibinayaa, wuxuuna hadiyad ahaan ugu keenayaa qofka uu jecel lahay, ujeeddada kaliya ee uu ka leeyahayna waa in ay dhoolacaddeyso.
2- Waqti la qaadashada qoyska
Haweeneyda aad daneyneyso qoyska ay kasoo jeeddana waa inaad daneyso. Laakiin ugu horreyn waa in aad waqti ku bixiso daawashada sawirrada laga qaaday markii ay yareyd. Sidoo kale baro sheekooyinka xiisaha leh ee ku saabsan walaaleheed.
Tan ugu weyn ayaase ah in aad xiriir wanaagsan la yeelato waalidiinta gabadha uu xiriirka idinka dhaxeeyo ama xaaskaaga ah, waqti badanna la qaadato halkii aad raaci lahayd saaxiibbadaa ama kubbad soo ciyaari lahayd.
Arrintaas waxaad ka faa’iideysaa in haweeneyda aad mustaqbalka ka leedahay ay kuu soo dhawaato, qalbigeedana uu kusoo raaco.
3- Qaadashada ugu dambeysa ee raashinka
Dad badan waxay aaminsan yihiin in ninka waxa ugu muhiimsan ee uu daneeyo ay tahay sidii uu calooshiisa wax u galin lahaa.
Haddii qaaddada ugu dambeysa ee cuntada uu u daayo haweeneyda uu xiriirka la leeyahay ama xaaskiisa oo la cunteyneysa, taas waxay muujineysaa in uu daryeelayo, aad iyo aadna u jecel yahay.
Haddii aan dhanka kale u dhigno, gabadhu sidee ayey kuu arkeysaa haddii saxankii aad wax ku wada cuneyseen aad raashinkii ugu dambeeyay kaligaa ka xaabsatid?
4- Albaabka gaariga
Ninka aan caajislowga ahayn ee marka ay isaga iyo haweeneydiisa gaariga ka dagayaan albaabka ka fura waa nin soo jiidasho leh aadna loo jeclaado.
Aad bay muhiim ugh tahay in uu ogaado in gacalisadiisu ay si nabad ah gaariga uga dagto iyadoo aan wax ciriiri ah dareemeynin.
Gabar walba oo sidaas loo sameeyo waxaa lagu hanan karaa qalbigeeda.
5- In saaxiibbada la baro
Ninka wax garadka ah wuu fahmi karaa in haweeneyda uu jecel yahay ay dareemeyso in uusan dan ka lahayn haddii marka ay isla socdaan oo qof saaxiibkiis ah ka hor imaado uu bari waayo, una sheegi waayo in ay tahay gacalisadiisa.
Laakiin ragga laga caqliga badan yahay way hilmaamaan haweeneydii la socotay waxayna sheeko la galaan qofkii saaxiibka ahaa ee ay markaas la kulmeen, taasina waxay horseedeysaa in gacalisadaada uu dhaawac ka gaaro qalbiga.
Marna yeysan sidaas dhicin, oo xaqiiji in boqoradda kula socota ay ku faraxsanaato wada socodkiinna.
6- Difaac u noqosho
Dhammaan gabdhaha ma wada fahmaan dhaqankan, laakiin waxaa jira kuwo si dhab ah kuu jeclaanaya marka ay kugu arkaan.
Marka aad waddada ku lugeyneysaan adiga iyo haweeneyda xiriirka kula wadaagta ama xaaskaaga ah, mar walba ka xig dhinaca u furan waddada.
Tusaale ahaan, adiga ka mar dhanka baabuurta u dhow, si aad uga xigsatid dhibaato kasta oo lama filaan ku imaata.
Shaki kuma jiro in ragga dabeecaddan leh ay yihiin kuwa waxgaradka ah.
7- Dhunkashada wajiga
Qodobkan waxa uu gaar u yahay ragga xaasaska leh, sababtoo ah dhaqan ahaan uma lihin in gabar sharci ahaan xalaal kuu ahayn aad dhunkato.
Marka aad xaaskaaga ka dhunkato wajiga (sujuudda), waxay dareemeysaa in aad daneyneyso oo aad iyo aad u jeceshahay.
8- Caawinta lama filaanka ah
Ragga qaar way iskala weyn yihiin in ay waxyaabaha qaar ku caawiyaan haweeneyda ay nolosha la wadaagaan, laakiin kuwaas ma aha ragga macquulka ah ee la jeclaado.
Labadiinna oo wada socda haddii ay garab kaaga baahato, sida in aad u qabato boorsadeeda gacanta, haka labolabeynin.
Inta badan gabdhuhu ma oggola in ay gacaliyahooda caawinaad u weydiistaan waxyaabaha qaar, laakiin marka ay ogaato in wax walba ay iyada kaaga muhiimsan tahay waa hubaal in ay si xad dhaaf ah kuu jeclaaneyso.
Haweeney kasta waxay ku riyootaa in ay hesho nin ka ilaaliya culeyska islamarkaana ka fikira farxaddeeda.
9- Jaakadda qabowga
Waxaa jira rag aysan kusoo dhicin in ay haweeneyda la socota ka taxaddaraan xilliyada qaar, tusaale ahaan marka uu qabow daran jiro ama roob dabeyl wata soo daato.
Balse ragga caqliga badan waxay jaakaddooda u siibaan gacalisadooda si ay iyada qabowga uga ilaaliyaan, naftooda ka horna waxay ka fakaraan nafteeda.
Tallaabadaas was mid kuu zoo jiideysa jacayl badan oo kaaga imaada xageeda.
Previous articleLix caado oo aad leedahay balse halis ku ah naftaada
Next articleMaxay tahay sababta aysan da’da uga muuqanin dadka reer Aasiya?